Ndekọ Ọnụahịa Video nke That Ghara Knmara! | Martech Zone
Ma ọ bụ vidio mmekọrịta, akụkọ kwa ụbọchị, vidiyo oge, ma ọ bụ usoro vidiyo ọ bụla, anyị bi n'ụwa ebe emepụtara ma rie ọdịnaya vidiyo karịa na akụkọ ntolite. N'ezie, nke ahụ bụ nnukwu ohere na nnukwu nsogbu n'ihi na a na-emepụta ọtụtụ ọdịnaya vidiyo na ahụtụbeghị n'ezie. Ihe omuma a site na Weebụsaịtị Builder.org.uk ekpughe ihe ngosi vidio ohuru ohuru.
Eziokwu 10 gbasara Azụmaahịa vidiyo
78.4% nke ndị ọrụ United States na-ele vidio dị n'ịntanetị
Menmụ nwoke na-etinye 44% oge karịa ụmụ nwanyị na Youtube
Afọ 25-34 dị na United States nwere ntinye vidiyo kachasị elu na 90%
Ọkara nke ndị America niile (nde 164.5) lere TV dijitalụ na 2016
72% nke ndị na-ere ahịa mmekọrịta mmadụ na-achọ ịmụ ahịa vidiyo
Vidio na mgbasa ozi mmekọrịta na-abawanye ịkekọrịta okpukpu iri
Dabere na Facebook, site na 2018, 90% nke ọdịnaya ha ga-adabere na vidiyo
96% nke ndị ahịa niile tinyere ego na azụmaahịa vidiyo na 2016
70% nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi kwenyere na mgbasa ozi vidiyo dị ka ma ọ bụ karịa karịa TV
Mkpokọta ego ROI nke vidiyo metụtara TV dị ugboro 1.27 karịa mgbe ejiri ya na TV
Enweghi ihe ndabara na anyị anaghị arụ ọrụ n'ịtụgharị nke anyị Indianapolis Podcast studio banye na vidiyo zuru ezu nke nwere ikike ozugbo. Anyị na-aga n'ihu na-ahụ nsonaazụ dị mma na vidiyo - naanị anyị ga-aga ngwa ngwa iji nwee nnukwu ego na ya. Ihe ịma aka bụ na ngwanrọ na ngwaike dị mkpa na-adaba na ọnụahịa ka ha na-etinye ụfọdụ ikike mgbasa ozi dị ịtụnanya maka web. Ọ bụrụ na anyị agbaba n’oge, anyị ga-emefu nnukwu ego. Mana ọ bụrụ na anyị agbaba n'oge, anyị ga-agbaghara ọsọ ahụ!
Dị ka mgbe niile, m ga-esoro gị ntuziaka anyị ga-eso gị!
Tags: eziokwuVidio Ahịaahịa vidiyovideo ahịa eziokwuvideo ahịa ọnụ ọgụgụvidiyo vidiyo statsweebụsaịtị NrụpụtaWeebụsaịtị Builder.org.uk